भेरीमा आइपुग्यो लिक्विड अक्सिजन – sunpani.com
भेरीमा आइपुग्यो लिक्विड अक्सिजन
नेपालगञ्ज – भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा लिक्विड अक्सिजन आइपुगेको छ ।
अस्पताल परिसरमा बनाइएको ट्यांकमा लिक्विड अक्सिजन खनाइएको छ । अब यो लिक्विड अक्सिजनलाई ग्यास बनाएर सेन्ट्रल पाइप लाइनबाट विरामीको बेडसम्म पु¥याइन्छ ।
भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट (मेसु) डा. प्रकाश थापाले बढीमा पाँच दिनमा पाइप लाइनबाट विरामीको बेडमा अक्सिजन पु¥याउने बताउनुभयो । मेसु डा. थापाले भन्नुभयो, ‘लिक्विड अक्सिजन आइपुग्यो । अब छिटो भन्दा छिटो पाइप लाइन विछ्याएर विरामी समक्ष पु¥याउँछौं ।’
भेरीले अहिले सिलिण्डरबाट काम चलाइरहेको छ । यो अस्पतालमा दैनिक चार सयसम्म सिलिण्डर खपत हुने गर्दछ । मेसु डा. थापाले लिक्विड अक्सिजनलाई ग्यास बनाएर पाइप लाइनबाट बेडसम्म पु¥याउने बित्तिकै सदाका लागि अक्सिजनको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले लिक्विड अक्सिजनको व्याकपमा सिलिण्डरलाई राखिने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रिफरल सेन्टर बनेको भेरी अस्पतालमा अहिले नै कोरोनाबाट अढाई सय विरामी रहेका छन् । एक ट्यांकमा २० हजार लिटर लिक्विड अक्सिजन हुन्छ ।
सरकारले अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन ट्यांक र पाइप लाइन विस्तारका लागि १५ करोड रुपैया विनियोजन गरिदिएपछि भेरीमा सदाका लागि अक्सिजनको समस्या समाधान हुने भएको छ । त्यसका लागि भारतमा लिक्विड अक्सिजन भने आपूर्ति भइरहनु पर्दछ ।
यता, कोहलपुर मेडिकल कलेजमा पनि लिक्विड अक्सिजन आइरहेको छ । यसरी दुई वटा ठूला अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजनको सप्लाइ भइरहदा अब बाँकेमा विरामीले अक्सिजनका लागि भौतारिनु नपर्ने सम्बद्धहरु बताउँछन् ।